Inani elikhulu labavelisi bemibhobho yentsimbi bathengisa kwisitokhwe
Imibhobho engenamthungo yezakhiwo (GB / t8162-2008) yimibhobho engenamthungo yezakhiwo ngokubanzi kunye nezakhiwo zoomatshini.
1. Imibhobho engenamthungo yezakhiwo (GB / t8162-2008) yimibhobho engenamthungo yezakhiwo ngokubanzi kunye nezakhiwo zoomatshini.
2. Umbhobho ongenamthungo wokuthutha ulwelo (GB / t8163-2008) ngumbhobho jikelele ongenamthungo osetyenziselwa ukuthutha amanzi, i-oyile, igesi kunye nolunye ulwelo.
3. Iityhubhu ezingenamthungo kwizibiyeli zoxinzelelo oluphantsi noluphakathi (gb3087-2008) zikumgangatho ophezulu wekhabhoni yentsimbi yentsimbi eshushu-eqengqelekayo kunye nebandayo etsalwa (iqengqelekisiwe) iityhubhu ezingenamthungo zokwenza iityhubhu zomphunga ezishushu kakhulu, iityhubhu zamanzi abilayo kwizibilisi zoxinzelelo oluphantsi noluphakathi lwezakhiwo ezahlukeneyo kunye iityhubhu zomphunga ezishushu kakhulu, iityhubhu ezinkulu zomsi, iityhubhu ezincinci zomsi kunye neetyhubhu zearch zezitena zeebhoyila zikaloliwe.
4. Iityhubhu ezingenamthungo kwiibhoyila zoxinzelelo oluphezulu (GB5310-2008) ziphezulu zekhabhoni yentsimbi, intsimbi yealloy kunye netsimbi ekwazi ukumelana nobushushu obungenamthungo kwindawo yokufudumeza ibhoyila yamanzi enoxinzelelo oluphezulu nangaphezulu.
5. Umbhobho woxinzelelo oluphezulu olungenamthungo lwezixhobo zesichumisi sekhemikhali (GB6479-2000) yintsimbi ekumgangatho ophezulu wekhabhoni yesakhiwo kunye nombhobho wentsimbi ongenamthungo ofanelekileyo kwizixhobo zekhemikhali kunye nombhobho wobushushu osebenzayo we-40 ~ 400 ℃ kunye noxinzelelo olusebenzayo lwe-10 ~ 30mA.
6. Iityhubhu ezingenamthungo zokuqhekeka kwepetroleum (GB9948-2006) ziityhubhu ezingenamthungo kwiityhubhu zesithando somlilo, ukutshintshiselana ngobushushu kunye nemibhobho kwiindawo zokucokisa i-petroleum.
7.Umbhobho wensimbi we-geological drilling (yb235-70) ngumbhobho wensimbi osetyenziswa lisebe le-geological kwi-core drilling. Ngokwenjongo, inokwahlulwa ibe ngumbhobho we-drill, i-collar ye-drill, i-core pipe, i-casing kunye ne-sedimentation pipe.
8. Umbhobho ongenamthungo wokomba wedayimani ongundoqo (gb3423-82) ngumbhobho ongenamthungo wombhobho wokomba, intonga engundoqo welitye kunye nesingxobo esisetyenziselwa ukugrumba okungundoqo wedayimani.
9. Umbhobho wokomba ioyile (yb528-65) ngumbhobho ongenamthungo osetyenziselwa ukujiya kwangaphakathi okanye kwangaphandle kuzo zombini iziphelo zokomba ioyile.
10. Umbhobho wentsimbi yaselwandle ongenamthungo (gb5312-85)
Izinto zoMbutho woHlelo lwaseTshayina kunye neKhowudi yeWelding - Umbutho woHlelo lwaseTshayina (CCS)
Det Norske Veritas (DNV) ikhowudi - det Norske Veritas (DNV)
Irejista kaLloyd yokuthumela (LR) ikhowudi - irejista yeLloyd yokuthunyelwa kwenqanawa (LR)
Imithetho yeGL - GL
Ikhowudi yaseMelika yokuthumela ngenqanawe (ABS) -i-American Bureau of Shipping (ABS)
I-Bureau Veritas (BV) ikhowudi - Bureau Veritas (BV)
Imithetho kaRina - uRina
Ikhowudi yoMbutho woHlelo lwaseJapan (NK) - UMbutho woHlelo lwaseJapan (NK)
Ingumbhobho we-carbon steel seamless weklasi yokuvelisa inkqubo yombhobho woxinzelelo, iklasi ye-II yenkqubo yombhobho woxinzelelo, ibhoyila kunye ne-superheater. Ubushushu obusebenzayo bodonga lwentsimbi yekhabhoni yombhobho olungenamthungo aluyi kuba ngaphezu kwama-450 ℃, kwaye olo lwentsimbi yealloyi eludongeni lombhobho olungenamthungo aluyi kudlula kuma-450 ℃.
11. Umbhobho ongenamthungo womkhono wemoto wesiqingatha se-shaft (gb3088-82) yintsimbi ekumgangatho ophezulu wekhabhoni yolwakhiwo kunye nengxubevange yolwakhiwo lwentsimbi eshushu-eqengqelekayo umbhobho ongenamthungo wokwenza inqwelo-mafutha yomkhono wesiqingatha se-shaft kunye nombhobho we-asi we-axle wendlu.
12. Umbhobho we-oyile woxinzelelo oluphezulu lwe-injini ye-diesel (gb3093-86) ngumbhobho otsalwa ngokubanda ongenamthungo wokwenza umbhobho woxinzelelo oluphezulu lwenkqubo yokutofa kwe-injini ye-diesel.
13. Umbhobho ochanekileyo wangaphakathi wedayamitha ongenamthungo we-hydraulic kunye ne-pneumatic cylinder barrel (i-GB8713-88) ngumbhobho ochanekileyo ozotyiweyo okanye obandayo ongenamthungo onedayamitha echanekileyo yangaphakathi yokuvelisa i-hydraulic kunye ne-pneumatic cylinder barrel.
14.Umbhobho opholileyo ozotyiweyo okanye obandayo oqengqelekayo ochanekileyo ongenamthungo (gb3639-83) ngumbhobho ozotyiweyo okanye obandayo oqengqelekayo ochanekileyo ongenamthungo onomgangatho ophezulu wokuchaneka kunye nokugqiba okuhle komphezulu wesakhiwo soomatshini kunye nezixhobo ezisebenza ngehydraulic. Khetha umbhobho ochanekileyo ongenamthungo ukwenza ulwakhiwo lomatshini okanye izixhobo ezisebenza ngehydraulic.
15. Umbhobho wensimbi engenamthungo wesakhiwo (i-GB / T14975-2002) ngumbhobho oshushu (owongeziweyo, owandisiweyo) kunye nombhobho ongenamthungo otsalweyo (oqengqiwe) owenziwe ngentsimbi engenasici kwimibhobho enganyangekiyo, iinxalenye zesakhiwo kunye neenxalenye ezisetyenziswa kakhulu kwiikhemikhali, i-petroleum, amalaphu alula, ezonyango, ukutya, oomatshini kunye namanye amashishini.
16. Umbhobho wentsimbi engenamthungo wokuthuthwa kwamanzi (i-GB / T14976-2002) ngumbhobho oshushu (owongeziweyo, owandisiweyo) kunye nombhobho otsalwa ngokubanda (oqengqiwe) ongenamthungo owenziwe ngentsimbi engatyiwayo yokuthutha ulwelo.
17.Umbhobho okhethekileyo omilisekileyo ongenamthungo ligama jikelele lombhobho ongenamthungo onezinye iimilo ezinqamlezileyo ngaphandle kombhobho ojikelezayo. Ngokwemilo eyahlukeneyo kunye nobukhulu becandelo lombhobho wentsimbi, linokohlulwa lube ngumbhobho olinganayo wodonga olumilise okhethekileyo (ikhowudi D), umbhobho ongalinganiyo wodonga olumilise okhethekileyo (ikhowudi BD) kunye nobubanzi obuguquguqukayo (ikhowudi BJ). Umbhobho okhethekileyo omileyo ongenamthungo usetyenziswa ngokubanzi kwiindawo ezahlukeneyo zesakhiwo, izixhobo kunye namalungu oomatshini.
18. Umbhobho wentsimbi ongenamthungo wombhobho wobushushu obuphantsi (GB / t18984-2003) ngumbhobho wentsimbi ongenamthungo wombhobho wenqanawa woxinzelelo oluphantsi lobushushu obungama-45 ℃ ~ - 195 ℃ kunye nombhobho wokutshintshisa ubushushu obuphantsi.
Ngokuqhelekileyo, iipayipi ezingenamthungo zenziwe nge-carbon high-quality steels ezifana ne-10, i-20, i-30, i-35 kunye ne-45, i-alloy-alloy structures ephantsi njenge-16Mn kunye ne-5mnv, okanye iintsimbi ezidibeneyo ezifana ne-40Cr, 30CrMnSi, 40MnB kunye ne-45MnB. 10. Imibhobho engenamthungo eyenziwe ngentsimbi yekhabhoni ephantsi efana ne-20 isetyenziswa ikakhulu kwimibhobho yokuhambisa ulwelo. Imibhobho engenamthungo eyenziwe ngentsimbi yekhabhoni ephakathi enje nge-45 kunye ne-40Cr isetyenziselwa ukwenza iinxalenye zoomatshini, ezifana neendawo ezinoxinzelelo lweemoto kunye neetrektara.
Ngokubanzi, amandla kunye novavanyo oluthe tyaba lombhobho ongenamthungo uya kuqinisekiswa. Imibhobho yentsimbi eshushu iya kuhanjiswa kwindawo eshushu yokuqengqeleka okanye yonyango lobushushu; I-Cold rolling ihanjiswa kwimeko yokuphatha ukushisa. Iityhubhu ezingenamthungo zeebhoyila zoxinzelelo oluphantsi naphakathi: ezisetyenziselwa ukwenza zonke iintlobo zeebhoyila ezinoxinzelelo oluphantsi kunye nophakathi, iityhubhu ezitshisa kakhulu, iityhubhu zamanzi abilayo, iityhubhu zamanzi abilayo, iityhubhu zomsi ezishushu kakhulu, iityhubhu ezinkulu zomsi, iityhubhu ezincinci zomsi kunye neetyhubhu zezitena ze-arch zelocomotive. iibhoyila.
Umbhobho oshushu oqengqelekayo okanye obandayo oqengqelekayo ongenamthungo owenziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu wekhabhoni. Ikakhulu yenziwe ngentsimbi ye-10 kunye ne-20. Ukongeza ekuqinisekiseni ukwakheka kweekhemikhali kunye neepropathi zoomatshini, uvavanyo lwe-hydrostatic, i-crimping, i-flaring, i-flattening kunye nolunye uvavanyo luya kwenziwa. Ukuqengqeleka okushushu kuya kuhanjiswa kwimeko eshushu yokuqengqeleka, kwaye ukuqengqeleka okubandayo (ukudaya) kuya kuhanjiswa kwimeko yonyango lobushushu.
1. Umbhobho wensimbi ongenamthungo wesakhiwo (i-GB / T8162-1999) ngumbhobho wensimbi ongenamthungo wesakhiwo ngokubanzi kunye nesakhiwo soomatshini.
2. Umbhobho wentsimbi ongenamthungo wokuthutha ulwelo (GB / t8163-1999) ngumbhobho wentsimbi ongenamthungo osetyenziselwa ukuthutha amanzi, i-oyile, igesi kunye nolunye ulwelo.
3. Umbhobho wentsimbi ongenamthungo webhoyila yoxinzelelo oluphantsi noluphakathi (i-GB3087-1999) yintsimbi ekumgangatho ophezulu wekhabhoni yolwakhiwo olushushu oluqengqelekayo kunye nebandayo olutsalwa (luqengqeleke) olungenamthungo lombhobho wentsimbi wokwenza umbhobho womphunga oshushu kakhulu, umbhobho wamanzi abilayo webhoyila yoxinzelelo oluphantsi noluphakathi. umbhobho womphunga oshushu kakhulu, umbhobho omkhulu womsi, umbhobho omncinci womsi kunye nombhobho wesitena okwi-arch webhoyila kaloliwe.
4. Umbhobho wentsimbi ongenamthungo kwibhoyila yoxinzelelo oluphezulu (GB5310-1995) yintsimbi ekumgangatho ophezulu wekhabhoni, intsimbi yealloyi kunye nentsimbi ekwaziyo ukumelana nobushushu, umbhobho wentsimbi ongenamthungo osetyenziselwa ukwenza umphezulu wokufudumeza webhoyila yamanzi ngoxinzelelo oluphezulu nangaphezulu.
5. Umbhobho wentsimbi ongenamthungo ophakamileyo wezixhobo zesichumiso (GB6479-2000) yintsimbi esemgangathweni ye-carbon structural steel kunye ne-alloy steel seamless steel pipe ilungele izixhobo zekhemikhali kunye nemibhobho enobushushu obusebenzayo - 40 ~ 400 ℃ kunye noxinzelelo lokusebenza lwe-10 ~ 30mA.
6. Umbhobho wensimbi ongenamthungo wokuqhekeka kwepetroleum (gb9948-88) ngumbhobho wentsimbi ongenamthungo ofanelekileyo kwiityhubhu zesithando somlilo, ukutshintshiselana kobushushu kunye nemibhobho kwiindawo zokucoca i-petroleum.
8. Umbhobho wentsimbi ongenamthungo wokomba wedayimani ongundoqo (gb3423-82) ngumbhobho wentsimbi ongenamthungo wombhobho wokubhobhoza, intonga engundoqo yelitye kunye nengxowa esetyenziselwa ukugrumba okungundoqo wedayimani.
9.Umbhobho wokomba ioyile (yb528-65) ngumbhobho wentsimbi ongenamthungo osetyenziselwa ukujiya kwangaphakathi okanye kwangaphandle kuzo zombini iziphelo zokomba ioyile. Umbhobho wentsimbi wahlulwe ngocingo olujikayo kunye nocingo olungajikiyo. Umbhobho wocingo olujikayo udityaniswe kunye nomdibaniso, kwaye umbhobho wocingo ongajikiyo udityaniswe nesixhobo sokudibanisa nge-welding ye-butt.
10.Umbhobho wentsimbi yentsimbi yaselwandle (gb5213-85) yintsimbi yensimbi engenamthungo yombhobho wokuvelisa inkqubo yombhobho woxinzelelo lweklasi yeklasi II, inkqubo yombhobho woxinzelelo, ibhoyila kunye ne-superheater. Ubushushu bokusebenza kombhobho wentsimbi yensimbi engenamthungo eludongeni aluyi kudlula i-450 ℃, kwaye olo lwentsimbi yentsimbi engenamthungo yombhobho eludongeni aluyi kudlula i-450 ℃.
11. Umbhobho wentsimbi ongenamthungo wemoto wesiqingatha somkhono we-shaft (gb3088-82) yintsimbi ekumgangatho ophezulu wekhabhoni yolwakhiwo kunye nengxubevange yolwakhiwo lwentsimbi eshushu-eqengqelekayo umbhobho wentsimbi ongenamthungo wokwenza inqwelo-mafutha yomkhono wesiqingatha se-shaft kunye nokuqhuba umbhobho we-axle wendlu.
12. Umbhobho we-oyile woxinzelelo oluphezulu lwe-injini ye-diesel (gb3093-2002) ngumbhobho wentsimbi ongenamthungo otsalwa ngokubanda wokwenza umbhobho woxinzelelo oluphezulu lwenkqubo yokutofa kwe-injini ye-diesel.
13. Umbhobho wentsimbi ochanekileyo ongaphakathi kwidayamitha engenamthungo (i-GB8713-88) ye-hydraulic kunye ne-pneumatic cylinder barrel ngumbhobho wentsimbi otsaliweyo okanye obandayo oqengqelekayo ochanekileyo ongenamthungo ongaphakathi ochanekileyo wedayamitha yokwenziwa kwe-hydraulic kunye ne-pneumatic cylinder barrel.
14.Umbhobho wentsimbi ongenamthungo otsaliweyo okanye obandayo oqengqelekayo (i-GB3639-2000) ngumbhobho wentsimbi otsaliweyo okanye obandayo oqengqelekayo ongenamthungo onobume obuchanekileyo obuphezulu kunye nokugqiba okuhle komphezulu wokwakhiwa koomatshini kunye nezixhobo zehydraulic. Ukukhetha ngokuchanekileyo umbhobho wentsimbi ongenamthungo ukwenza ubume boomatshini okanye izixhobo zehydraulic kunokonga kakhulu iiyure zomatshini, ukuphucula ukusetyenziswa kwezinto kunye nokuphucula umgangatho wemveliso.
15. Umbhobho wensimbi engenamthungo wesakhiwo (i-GB / T14975-2002) ngumbhobho oshushu oqengqelekayo (owongeziweyo, owandisiweyo) kunye nombhobho wentsimbi ongenamthungo otsalweyo (oqengqiwe) owenziwe ngentsimbi engenakutyiwa kwimibhobho enganyangekiyo, iindawo ezakhiweyo kunye namalungu asetyenziswa ngokubanzi iikhemikhali, i-petroleum, i-textile elula, unyango, ukutya, oomatshini kunye namanye amashishini.
16. Umbhobho wentsimbi engenamthungo wentsimbi yokuthutha ulwelo (i-GB / T14976-2002) ngumbhobho wentsimbi eshushu (owongeziweyo, owandisiweyo) kunye nombhobho wentsimbi ongenamthungo owenziwe ngentsimbi engatyiwayo yokuthutha ulwelo.
17. Umbhobho wentsimbi ongenamthungo okhethekileyo ligama eliqhelekileyo lombhobho wentsimbi ongenamthungo kunye nezinye iimilo zecandelo ngaphandle kombhobho ojikelezayo.
Ngaphambili: I-45 # umbhobho wensimbi unomgangatho ophezulu kunye nexabiso eliphantsi
Okulandelayo: Ukusebenza okuphezulu kwensimbi engenasici ityhubhu elungiselelwe
Fluid 304 umbhobho wentsimbi engatyiwa
Ulwelo 316 umbhobho weNtsimbi eNgatyiwayo
Umbhobho wentsimbi ongenamanzi
Umbhobho weStainless Steel olwelwe ngamanzi
Umbhobho wentsimbi ongenamthungo weFluid
16Mn umgangatho ophezulu umthungo wentsimbi umbhobho manufactu...
45# ingenamthungo kumzi-mveliso wombhobho wentsimbi
Umgangatho kunye nobungakanani be-diameter enkulu yolwelo ...
I-Q345B yomenzi wombhobho wesakhiwo sentsimbi...
Q345C ubushushu obuphantsi umbhobho wentsimbi indawo yokwenene
20 # ulwelo ingenamthungo umbhobho umenzi wentsimbi